172 okushiwo abanye
Ooty, Tamil Nadu, i-India
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Stumpfields
Ikhelwe ezintabeni zase-Nilgiri ku-8,000ft, ngaphansi nje kwe-Doddabetta Peak kumahektha ayi-1.5, le ndlu yokuziphekela enegumbi lokulala emihlanu enampheme, indawo yepikiniki kanye neziko iyindawo yokubalekela enokuthula.
Njengoba izungezwe amahlathi eziqiwi kazwelonke kanye namasimu etiye, umbono uyamangalisa. Amakhilomitha ayi-7 nje ngaphandle kwedolobha i-Ooty, le ndawo iseduze nazo zonke izindawo ezinhle kakhulu zezivakashi kodwa ivaliwe ngasikhathi sinye. Uzitholela indlu yonke, kodwa wabelane ngengadi nangaphandle nezinye izivakashi.
Amakhilomitha ayi-7 nje ngaphandle kwedolobha i-Ooty, le ndawo iseduze nazo zonke izindawo ezinhle kakhulu zezivakashi kodwa ivaliwe futhi ikude ngasikhathi sinye. Kude nesiphithiphithi sasedolobhaneni i-Ooty, iStumpfields iyindawo enokuthula, elungele umndeni, ebheke izindawo zetiye, ihlathi lasendle, nezintaba. Amaphathi, umculo onomsindo nokuphuza ngokweqile akwamukelekile ekhaya lethu. Izivakashi ziyacelwa ukuthi zihloniphe amahora okuthula kusukela ngo-10 ebusuku kuya ku-8am. Izivakashi zizokwazi ukufinyelela okukhethekile kuyo yonke indlu, kuvulandi, netafula lepikiniki. Sinabasebenzi lapha phakathi nosuku abazokweseka izivakashi, futhi ebusuku, basuke bengashayi ucingo uma kukhona okukukhathazayo.
Sinamakhishi ahlomele kahle ukuze ukwazi ukupheka ukudla kwakho. Kodwa-ke, siyaqonda ukuthi akuwona wonke umuntu ofuna ukupheka eholidini lakhe ukuze "UBHEKE Umpheki," (bheka imininingwane kumanuwali wendlu).
Sinxusa kuphela abantu abaqinile, abathanda imvelo, abazimele, abahlakaniphile, abanomdlandla ukuthi babhukhe iholide lapha. Indawo yayo yasendle futhi engumqansa, futhi ebusuku ngeke uzwe umsindo wezimoto, kodwa kunalokho umsindo womoya ezihlahleni, izikhova ebumnyameni, imvula phezu kophahla, izinyoni nezilwane. Nakuba kusihlwa kungase kube nokukhanya komlilo, amakhandlela nogesi, uma izibani sezicishiwe, kuzoba mnyama bhuqe nxazonke. Lapho isibhakabhaka sicwebile izinkanyezi nenyanga mhlawumbe zinhle kakhulu ongake uzibone. Kuyinto mayelana nokuba sezintabeni 8,000 ft ukuphakama, ngaphandle kokungcola okumboze umkhathi. Kwezinye izikhathi zonyaka, ikakhulukazi emonsoon, kuba mnyama ngendlela emangalisayo. Izintaba zase-Ooty nazo zipholile kakhulu unyaka wonke, ikakhulukazi ebusuku. Nakuba ezindlini zifudumele futhi zithokomele, umoya wasezintabeni ngaphandle uyashesha! Kulabo abafuna isevisi yasekamelweni, i-wifi, i-TV, indawo yokudlela, kanye nesevisi yabasebenzi yamahora angu-24 sincoma ukuthi ubhukhe ihhotela edolobheni lase-Ooty. Woza lapha ulungele ukunqamula kuma-imeyili ne-inthanethi, ama-TV namamuvi, bese uzama ukusonga eziko elivulekile ngenkomishi kashokoledi oshisayo nencwadi enhle. Vumela umzimba wakho nengqondo zimiswe kabusha futhi zishaje kabusha njengoba uwohloka futhi uvumela imvelo ekuzungezile ikukhumbuze ukuthi kunendlela ehlukile yokuphila.
Umbhede olala umuntu oyedwa o-1, 1 umbhede wosana
4.73 ·172 okushiwo abanye
4.73 out of 5 stars from 172 reviews
4.73 · 172 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-172
Sihlala ehlane, sithe njo ngokuphelele kungekho ezinye izindlu ezisizungezile, ngaphandle kwaseStumpfields nase-Ivy. Ekupheleni kohambo lwethu, eduze komgwaqo omkhulu kunesigodi esincane lapho kuhlala khona abakhi betiye bendawo. Ungabona kancane leli dolobhana ukusuka kuvulandi wekotishi. Siphakathi nendawo engathuthukisiwe ngokuphelele engamahektha ayi-10 ezungezwe futhi ebheke ihlathi eligcinwe nguhulumeni. Ukufinyelela kwethu ezindleleni, ukubukwa okumangalisayo, amazwibela ezilwane zasendle kanye nezinhlobonhlobo zezinyoni kule ndawo yemvula ephakeme yokuphakama nokuthula nokuba sodwa kwenza indawo yethu ihluke phakathi kwamahhotela ezivakashi adayisa kakhulu, aminyene nezindawo zokulala e-Ooty nasezindaweni ezizungezile. Siyaziqhenya ngemizamo yethu yokuvikela imvelo ezungeze indlu yethu. Sigcina amagceke ethu kanye nehlathi elisizungezile namadlelo asizungezile ehlanzekile ngodoti onguziro. Sicela ukuthi usisize sikugcine kumsulwa. Bheka indawo yethu yomquba yasekhishini eduze nezitebhisi engadini kanye neziqukathi zethu zikadoti ezitholakala egaraji.
Ababungazi bahamba kakhulu, kodwa uma basedolobheni ngokuvamile batholakala ukuze basize nganoma imiphi imibuzo. Sinaye umnakekeli otholakala usuku lonke ukuze asize nganoma iyiphi indlela. Izisebenzi zasendlini zisebenza phakathi kuka-9:30am no-7pm, futhi zinganikeza nosizo lapho ludingeka.
Ababungazi bahamba kakhulu, kodwa uma basedolobheni ngokuvamile batholakala ukuze basize nganoma imiphi imibuzo. Sinaye umnakekeli otholakala usuku lonke ukuze asize nganoma iyiphi…